Blog Action Day: Mmiri na Mmanụ | Martech Zone
Blog Action Day: Mmiri na Mmanụ
Monday, October 15, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Adịghị m onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi. Abụghị m onye na-akwado "Eziokwu Na-adabaghị Adaba". Na data na-enyo enyo echekwa m na ọ bụ mpako mmadụ kwenyere na omume ọjọọ anyị na-egbu ụwa. Earthwa anọghị na nsogbu… ọ bụ ndị nọ.
Ọ ga-amasị m ịkwọ ụgbọ ala elektrik, mana amaara m na ha anaghị arụ ọrụ nke ọma ma na-emecha gbaa mmanụ ọkụ ọkụ ọkụ. Ọ ga-amasị m ịkwọ ụgbọ ala nke na-eji mmanụ ụgbọ ala ndị ọzọ, mana amaara m na ịme mmanụ ọkụ ahụ adịghị arụ ọrụ yana and na-agbachapụ mmanụ ọkụ ọkụ. Ikekwe ngwakọ bụ azịza kachasị mma, mana m na-echegbu onwe m banyere ebe batrị na-aga na mmiri corrosive ejiri.
Aghọtara m na mpako anyị na-emekwa ka esemokwu ụwa, nsogbu ahụike, na nsogbu ike mgbe enwere ike izere. Ọ ga-amasị m ịpụ n'èzí ma nụ isi ikuku. Achọrọ m inwe ike ịga ugwu na agaghị ahụ ahịhịa. Ọ ga-amasị m ịhụ ka anyị na-emefu obere ego na mkpocha. Ma, n'ezie, ọ ga-amasị m ka United States belata ịdabere na mmanụ na mba ndị Arab.
Iji mee nke ahụ, ọ dị m n’aka ime mgbanwe. Ndị mmadụ na-ekwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile na-ebido n’ụlọ. Enwere m ike ịma aka na nchekwa nchekwa ike niile na-amalite n'ụlọ. Ego ejiri na karama plastik, ihe mkpofu ala na ume na-efu efu na nke ahụ na-eme nwoke na-achọghị mgbanwe dị ka m chọrọ ịkwado 'akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ'.
Dị ka onye hụrụ n'anya n'èzí, achọghị m ịhụ ebe a na-ekpofu ihe na ebe a na-ekpofu ihe na-ewepụ ọmarịcha ịma mma nke mba anyị. Achọghị m ịhụ ka anyị lụọ agha iji kwado mmanu anyị.
Ma olee otu m ga - esi nwee mgbanwe? Lee ihe 3 m nwere ike ịme (ma ị nwekwara ike, kwa!):
Kwụsị ịzụrụ mmiri mmiri. M na-azụta ikpe n'ụlọ ma hụ na mkpofu m nwere ike jupụta ngwa ngwa na ngwa ngwa. Aga m akwaga n’ebe obibi ị na-arụ ebe a na-ebute mmiri n’ime ite ndị a na-emegharị emegharị. M na-atụ ụjọ na enweghị m ike ịkwaga mmiri mmiri, mmiri dị na obodo m na-esi ísì ma mee ka ihe niile daa nchara.
Aga m aga zụọ ahịa na ahịa ndị ọrụ ugbo obodo ahụ. You ma na mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi na-aga njem dị 1,800 iji ruo efere gị? (Isi mmalite: Omimi di omimi). Transportationgbọ njem ugbo gaa na canneries ma ọ bụ ihe nkwakọ ngwaahịa, wee banye na nnukwu ụlọ ahịa, bụ nnukwu mmanụ ọkụ na mba anyị. Ọ na-ewute onye ọrụ ugbo na-eme ihe n'eziokwu n'ihi na akwụ ụgwọ njem maka ụgwọ njem. Kwado ahịa ndị ọrụ ugbo nke obodo gị ma ha enweta ego karịa ma anyị na-eji obere mmanụ!
Gbanwee temometa gị ma nye ohere maka ogo 5 karịa na akụkụ ọ bụla - ma ọkụ ma oyi. Gini mere iji jiri igwe oyi ma obu ikpo oku? Gbanwe uwe gị n'ime iji nye gị nkasi obi… ejila ike karịa.
Aga m amalite taa. Enwere m olileanya na ị ga-eme, kwa!
Tags: Ebe a na-ere ere nke Comcashnzaghachi emailnjikarịchaụgbọ ibu azụmahịaịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụisiokwuwp_posts
Douglas Karr Monday, October 15, 2007 Tuesday, October 4, 2011
Tinye ebe nrụọrụ gị na Sitemap gị na KML Njikwa
Etu esi eri nri Gọọmet Pretzel?
Ọkt 15, 2007 na 2:39 PM
Akwa post, Doug. M na mgbe a kwere ekwe na-eme ihe i nwere ike ọ bụghị freaking si. M na-azụta ọhụụ mgbe m nwere ike b / c ahụike, na-akwado onye ọrụ ugbo obodo / akụ na ụba yana echeghị maka ya igbutu njem. M tụgharịrị gaa n'igbe mmiri Brita kama karama mmiri, ọ dị ọnụ ala karịa ọrụ ụlọ ma ị gaghị echegbu onwe gị maka nnyefe. Naanị gbanwee nza gị na ọnwa ole na ole ọ bụla ma cheta jupụta mmiri mmiri tupu ya agbapụta. Ọ na-ewe nkeji iji nụchaa.
Ana m ejikwa bọlbụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ka m gbanwere bọlbụ ndị a, akụkọ na ndị m maara na-eji ha na-ekwu na ha ga-egbutu dollar ole na ole site na ụgwọ eletrik gị kwa afọ ma ha ka mma maka gburugburu b / c ọ bụghị ọtụtụ ihe mkpofu na-emepụta site na-agbanwe bulbs na ha na-eji obere ume.
Daalụ maka ihe ncheta.